मार्क्स 30, 2021 मा 2: 18 PM
यहाँको गणित बिग्रिएको देखिन्छ। भिडियोको उदाहरणले 120 सकारात्मक, 20 नकारात्मक, र 10 समाधान गरिएका नकारात्मक समीक्षाहरू दिन्छ। यदि मैले ती नम्बरहरूलाई माथिको सूत्रमा राखें भने मैले भिडियोमा देखाइएको 572.75% भन्दा सट्टा 62.41 पाउँछु।
मार्स 31, 2021 मा 11: 10 एएम
तपाईं सहि हुनुहुन्छ, मैले यो लेख अपडेट गर्न आवश्यक छ। सूत्र वास्तवमा V = 7.9 (.62P -.17N² + .15R) हो।
जुन 5, 2021 बिहान 5:40 बजे
OwO, धेरै रोचक पोस्ट। अनलाइन समीक्षाहरूमा बिक्रीको भविष्यवाणी गर्ने क्यालकुलेटर छ भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन। बाडेको मा धन्यवाद। म गणना गर्छु र मेरो स्कोर हो: 1620.53%। मेरो बिक्री स्कोर मा तपाइँको राय के छ?
जुन 9, 2021 मा 4: 13 PM
वाह! तपाइँको समीक्षामा त्यो जम्प र बधाई हो।